कोरोना संक्रमितलाई घरघरै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउँदै छन् यी संस्था
- सम्झना घिमिरे
कोरोना संक्रमितको सख्या दिनहुँ बढिरहँदा अधिकांश अस्पतालहरू संक्रमितले भरिभराउ छन् । अझ त्यसमा पनि संक्रमणकै जोखिमले गर्दा अधिकांश अस्पतालको ओपीडी सेवा ठप्प छन् भने आपतकालीन सेवाहरू पनि अवरुद्ध छन् ।
कोरोनाको संक्रमण नभएका सिकिस्त बिरामीलाई पनि अस्पतालले भर्ना नलिने तथा उपचार नगरिदिँदा अस्पताल चहार्दा–चहार्दै मृत्यु भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन् ।
संकटपूर्ण अवस्थामा पनि भयभीत हुँदै बिरामी हुँदा पनि घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय दीर्घरोगीहरूको औषधि किन्न जान नसकेर औषधि सेवन छुटिरहेको छ भने कतिपय सामान्य बिरामीहरू पनि उपचार नगरी घरमै बस्न बाध्य छन् ।
संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बजार पसल, संघसंस्था, यातायातलगायतका सम्पूर्ण ठप्प भएको चार महिना बितिसक्दासमेत अत्यावश्यकमा पर्ने स्वास्थ्य सेवा जनताले सहजै पाउन सकेका छैनन् । महामारी अन्त्य हुने छाँटकाँट नदेखिइरहेको समयमा संक्रमणको जोखिम मोलेरै भए पनि केही स्वास्थ्यकर्मी र औषधि व्यवसायीहरू हरदम बिरामीको सेवामा खटिइरहेका छन् ।
बिरामी पर्नुभयो ? औषधि सकियो ? पख्नुस् ! आउँदै छन् सुप्रिया
उनीहरू घरघरमै पुगेर बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने उपचार गर्ने, बिरामी लिनका लागि गाडीको व्यवस्था गरिदिने, ल्याब टेस्टहरू घरमै आएर गर्ने र औषधिजन्य सामानहरू पनि फोन गरेकै भरका घरमै ल्याइदिन जुटिरहेका छन् ।
अहिले उपत्यकामा मात्रै २० भन्दा बढी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले बिरामीको घरमै पुगेर सेवा दिइरहेका छन् । १ सयभन्दा बढी ल्याब तथा फार्मेसीले घरमै पुगेर सामान्य परीक्षणदेखि औषधिसम्म पुर्‍याउँदै आएका छन् । यीबाहेक उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालले अनलाइनमार्फत बिरामीलाई कन्सल्ट गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
स्टार अस्पतालले कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई पनि घरमा आइसाेलेसनमा बस्ने वातावरण मिलाउँदै स्टार हाउसपिटल सर्भिस दिँदै आएको छ । जसमा डाक्टरहरूले दिनमा दुई पटकसम्म बिरामीको अवस्थाबारे बुझ्ने, खानेकुराको बारेमा सल्लाह दिने, रूटिङ बनाउने, औषधि र ल्याब परीक्षण घर पुगेर गर्नेलगायतको सेवा दिँदै आएको छ ।
१४ दिने प्याकेज राखेर सःशुल्क सेवा दिँदै आएको अस्पतालले १२ हजार ५ सय रूपैयाँमा स्वास्थ्य उपचारसँगै दैनिक डाक्टरको अनलाइन निगरानी गर्दै घरमै औषधि पुर्‍याइदिँदै आएको छ ।
यसका साथै अन्य दीर्घरोगीहरूलाई औषधि तथा सामान्य बिरामीहरूलाई अनलाइनबाट कन्सल्ट गर्दै आएको छ ।
यस्तै, हाम्रो डाक्टर एपले पनि बिरामीलाई अनलाइनबाट सल्लाह दिने, बिरामीको लक्षणको प्रकृति बुझेर औषधि दिनेलगायतका कामहरू अनलाइनबाटै गर्दै आएको छ । हाम्रो डाक्टर अनलाइनले पनि १२ प्रकारमा बिरामीहरूलाई विशेष चिकित्सकको माध्यमबाट कन्सल्ट गर्ने काम गरिरहेको छ ।
योसँगै कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई पनि डाक्टरको सल्लाहबमोजिम औषधि घरमै पुर्‍याउनुका साथै निगरानी गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
यीबाहेक अहिले पसलमा मात्रै सीमित रहँदै आएका औषधि पसलेहरू पनि घरघरमा पुगेर ब्लडप्रेसर जाँच्ने, सामान्य बिरामीको परीक्षण गर्ने र औषधि घरमै पुर्‍याउन सुरू गरेका छन् । घरघरमै पुगेर औषधि पुर्‍याउँदै ल्याबसम्बन्धी सर्म्पूर्ण परीक्षण गर्दै आएकी सुप्रिया शाक्य नेपाल मेडकी संचालक हुन् । उनीलगायत चार जना कर्मचारीले अहिले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा घरघरमै उपलब्ध गराउँदै आएकी छिन् ।
लकडाउनको समयमा पनि १ हजारभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई घरसम्म पुगेर स्वास्थ्य सुविधा दिँदै आएको नेपाल मेडले डेलिभरी चार्ज पनि नि:शुल्क गर्दै आएको छ ।
संचालक सुप्रिया भन्छिन, ‘सु्रूमा हामीलाई बजार लिन गाह्रो भए पनि गुणस्तरीय औषधि तोकिएकै बजार मूल्यमा, डेलिभरी शुल्कबिना सहजै उपलब्ध गराउन थालेपछि विस्तारै हामीलाई ग्राहकहरूले विश्वास गर्न थाल्नुभयो । अहिले ग्राहकहरूले विश्वास गरेर औषधि मगाउने क्रम पनि बढेको छ । आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो ग्राहक संख्या पनि बढेको छ । हाल १ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएका छौँ ।’
नेपाल मेडले स्वास्थ्य सेवा घरमै पुगेर दिँदा पीपीई, मास्क, पञ्जा र स्यानिटाइजर लगाएर सामान घरघरै पुर्‍याउँदै आएको छ । त्यति मात्र नभएर संक्रमणको खतरामा बिरामी नपरून् भन्ने हेतुले २४ घण्टासम्म सामान नछुन अग्रहसमेत गर्दै आएको छ । नेपाल मेडले ग्राहकले अर्डर गरेको २४ घण्टाभित्रै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउँदै आएको छ ।
लकडाउनअघिदेखि नै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाटै दिँदै आएको इजी हेल्थ केयरले पनि अहिले बिरामीहरूलाई अनलाइनमार्फत कन्सल्ट गर्दै आएको छ । योसँगै कस्ता किसिमका बिरामीलाई कुन अस्पतालमा कुन डाक्टर उपयुक्त हुन्छ भन्ने जानकारी पनि बिरामीलाई दिने गर्दछ ।
इजी हेल्थ केयर म्यानेजिङ डाइरेक्टर अखिल शाक्य कोरोना महामारीको समयमा कुन अस्पताल बिरामीलाई उपयुक्त हुन्छ र कुन अस्पतालमा उपचार सम्भव छ भन्ने अध्ययन गरेर बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउनेसमेत गरेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले अहिले अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा शय्याको अभावमा भर्ना हुन नसकेका बिरामीहरूलाई अस्पताल खोजेर बिरामीलाई घरसम्म पुगेर आफैँ अस्पताल पुर्‍याउँदै आएका छौँ ।’ यी बाहेक अस्पताल नलगी घरमै उपचार सम्भव हुने बिरामीहरूका लागि विशेषज्ञ डाक्टरसँग समय लिएर अनलाइनबाटै निगरानी र कन्सल्ट गर्ने काम गर्दै आएकाे उनले बताए ।
अखिलले निषेधाज्ञासँगै उपत्यकामा संक्रमण जोखिम बढ्दै जाँदा अनलाइनबाट सेवा लिनेहरू बढेको बताउँछन् । जसका लागि अखिल इजी हेल्थ केयरमा फोन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
यी त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । यही अधिकांश अस्पस्ताल, क्लिनिक तथा औषधि पसलहरूले अनलाइन डेलिभरी, हेल्थ होम सर्भिस दिँदै आएका छन् । अनलाइनबाट औषधि खरिद गर्न पटक्कै नरूचाउने ग्राहकहरू पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अनलाइन सर्भिसप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् ।
पछिल्लो समय निषेधाज्ञा बढेसँगै अनलाइनबाट स्वास्थ्यबारे जानकारी लिन, परीक्षणका लागि घरै बोलाउने तथा औषधि मगाउने ग्राहकको संख्यामा वृद्धि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २५, २०७७, ००:२५:००